ဒေါက်တာ ဗိုက်ကလေး www.drbikalay.com: EDUCATIONAL
The Best Myanmar Movies & Photos <<>>Daily Update
မြန်မာ သီးသန့် အောကားပေါင်း 3000 လောက် နေ့တိုင်းတင်ပေးသွားမည် ဒေါင်းထားကြပါ ကားသစ်တွေပို့ပေးတဲ့သူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်
drbikekalay1@gmail.com (or) Hangouts သို့ ဓါတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို ဖိုင်များကို ဆက်သွယ်ပေးပို့ နိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါ သည်။ ပေးပို့သူများ၏ အကောင့်များကို အများမသိစေရန် အာမခံကြောင်း
Posted by Admin at Sunday, August 06, 20170comments
Categories: 40+, 4K MOVIES, 4K PHOTOS, BOOKS, EDUCATIONAL, GROUP SEX, HOMEMADE, MODELS, MYANMAR 69, MYANMAR MOVIES, PHOTOS, SEX CHAT, SEX TOY, TEEN
များသောအားဖြင့်တော့ ထိပ်မှာရှိတဲ့ အသားနုကနေ ခံစားလို့ရတဲ့အရသာ ပိုကောင်းစေတယ် မိမိအမျိုးသမီးကို စိတ်ကျေနပ်အောင် ပေးစွမ်းနိင်တယ်လို့ပဲ အတော်များများ သိကြပါတယ်.. မှန်သင့်သလောက်လည်း မှန်ပေမယ့် ဒီထက်ပိုအရေးပါတဲ့ အချက်တွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်... ငယ်ရွယ်စဉ် ကလေးဘ၀ အသက် ၅ နှစ် မတိုင်ခင် ဒီလိုအရေပြားဖြတ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် အရွယ်ရောက်တဲ့အခါ STD ( sexually transmitted diseases) လို့ခေါ်တဲ့ လိင်မှတဆင့်ကူးစက်တဲ့ ရောဂါတွေ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိကို လျှော့ကျ စေနိုင်တယ်လို့ တချို့သုတေသနပြုချက်တွေမှာ ရေးပါတယ်... အရေးအကြီးဆုံးကတော့ ဒီလိင်တံရဲ့ထိပ် (ဒစ်) နဲ့ အရေပြားကြားမှာ ချေးကပ်ခြင်းပါပဲ. အနံ့အသက်မကောင်း ချေးဖတ်ကပ်နေတဲ့ လိင်တံဟာ carcinoma penis လို့​ခေါ်တဲ့ လိင်တံကင်ဆာ ဖြစ်စေနိုင်တာပါပဲ...သန့်ရှင်းရေး သိပ်အရေးကြီးပါတယ်. နောက်တခြား ပြသနာတွေဖြစ်တဲ့ အရေပြားရှည်ပြီး ပိုးဝင်ခြင်း၊ ရောင်ရမ်းပြီး ထိပ်ပိတ်ခြင်း. ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်ခြင်း စသဖြင့် အစီအစဉ်လိုက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်... ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အမျိုးသားတွေအတွက် လိင်တံ အရည်ပြားဖြတ်ခြင်းနဲ့ပါတ်သက်လို့ ထုံဆေး ထိုးတဲ့အချိန် အပ်ဆူးလို့နာတာကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ complication အတော်နည်းပါတယ်... STD လျှော့ကျမယ်.ထိတွေ့ မှု ပိုကောင်းလာမယ်. သန့်ရှင်း​ရေး ပိုမို လွယ်ကူလာမယ်. ကင်ဆာဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်.... သိပ်ခက်​ခက်​ခဲခဲ လုပ်ရတဲ့ ခွဲစိတ်မှုမျိုးလည်း မဟုတ်ပဲ ဆရာဝန်နဲ့ သေချာပြ ခွဲစိတ်လိုက်ရင် ဆေးခန်း အတော်များများ အဆင်ပြေပါတယ်... ဈေးနှုန်းကတော့ ကိုယ်လုပ်ရင်လုပ်တဲ့ နေရာပေါ် မူတည်ပြီး ၃ သောင်းကနေ၊ အများဆုံး ၅ သိန်းလောက်အထိ ယူကြပါတယ်..... သင်​တို့ရဲ့ ချစ်​သူ​ ကျန်းမာ​ရေး​ကောင်းမွန်​ဖို့ လိင်​တံအ​ရေးပြားဖြတ်​ခြင်းကို ပူး​ပေါင်းပါဝင်​ ကူညီကြပါစို့..... . . .
ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ​လေးပါ.... . .
လိင်​တံအ​ရေပြားငုံသူ​တွေနဲ့သန့်​ရှင်းတဲ့လိင်​တံဖြစ်​ဖို့ဆိုရင်​လိင်​အဂါင်္သန့်​စင်​​ဆေးရည်​အသုံးပြုသင့်​ပါတယ်​... လိင်​တံဟာသန့်​ရှင်း​နေမှသာ​ရောဂါပိုးမွှားကင်​စင်​ပြီးကာမအရသာအပြည့်​အ၀ရရှိမှာဖြစ်​ပါတယ်​... ဒါ​ကြောင့်​သန့်​ရှင်းတဲ့လိင်​တံဖြစ်​ဖို့အ​ရေးကြီးပါတယ်​....
Posted by Admin at Saturday, May 13, 20170comments
Drbikalay APK Download for Mobile
Posted by Admin at Wednesday, November 30, 20160comments
Categories: 40+, 4K MOVIES, 4K PHOTOS, ASIAN, BBW, BIG ASS, BIG BOOBS, DATING, EDUCATIONAL, FILM, G-PHOTOS, MODELS, MYANMAR 69, MYANMAR MOVIES, PHOTOS, TEEN
Posted by Admin at Friday, November 18, 20160comments
Categories: 40+, 4K MOVIES, 4K PHOTOS, ASIAN, BBW, BIG ASS, BLOWJOB, EDUCATIONAL, FILM, G-PHOTOS, HAIR PUSSY, HOMEMADE, MYANMAR 69, MYANMAR MOVIES, ORAL SEX, PHOTOS, SEX TOY, TEEN
Posted by Admin at Saturday, August 27, 20160comments
Categories: 40+, 4K MOVIES, 4K PHOTOS, ANAL, BBW, BIG ASS, BIG BOOBS, BIG TITS, BLOWJOB, BOOKS, EDUCATIONAL, G-PHOTOS, GROUP SEX, HAIR PUSSY, HOMEMADE, MALAYSIA, MODELS, MYANMAR 69, MYANMAR MOVIES
မမ များ နှင့် အန်တီများ အတွက် အမျိုးသား အချိန်ပိုင်း ခေါ်နိုင်ပါတယ်
အမျိုးသား အချိန်ပိုင်း ခေါ်နိုင်ပါတယ်၊ ခံစားမှုလိုချင်သော မမများ၊ အန်တီများ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် 09453299467
အမျိုးသား အချိန်ပိုင်း ခေါ်နိုင်ပါတယ်
အရှုပ်အရှင်း ကင်းကင်း နဲ့
Chat Box မှ တဆင့် မေးမြန်းပါခင်ဗျာ
drbikekalay1@gmail.com သို့ ဓါတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို ဖိုင်များကို ဆက်သွယ်ပေးပို့ နိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါ သည်။ ပေးပို့သူများ၏ အကောင့်များကို အများမသိစေရန် အာမခံကြောင်း
Posted by Admin at Wednesday, June 29, 20160comments
Categories: ASIAN, BBW, BLOWJOB, DATING, DOGGY STYLE, EDUCATIONAL, HAIR PUSSY, HOMEMADE, LINKS, MYANMAR MOVIES, ORAL SEX, PHOTOS, SEX TOY, TEEN
ငယ်ပါမှာ ဂေါ်လီထည့်တယ်ဆိုကတည်းက ရည်ရွယ်ချက်က မကောင်းတော့ပါဘူး။ စိတ်ရင်း မကောင်းဘူးလို့ပဲ အရပ်စကားနဲ့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
သဘာဝ မဟုတ်တဲ့နည်းနဲ့ ကိုယ်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံသူ မိန်းမသားကို အာရုံနှိုးဆွဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ထည့်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းပြောရင် ဒါဟာ လိမ်လည်တာပါပဲ။ ကိုယ့်မှာ အစွမ်းအစ မရှိတဲ့သူမို့လို့ ပြင်ပ ပစ္စည်း အကူအညီကို ရယူရတာပါ။ အစွမ်းအစ ရှိသူ ယောက်ျားသားသာဆိုရင် အဲဒါတွေ မလိုပါဘူး။ သဘာဝက ပေးထားတဲ့ အရာတွေရဲ့ နဂိုပါ ရှိရင်းစွဲအတိုင်း တစ်ဖက် မိန်းမသား ကိုယ့်ကို ချစ်ခင် စွဲလန်းနေအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါမှ ယောက်ျားကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဂေါ်လီထည့်ပြီဆိုကတည်းက အဲဒီ့ ယောက်ျားဟာ
Watch More »»»
Posted by Admin at Sunday, September 06, 20150comments
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်မှာ လိင်ဆက်ဆံလို့ ရ/မရ
ကိုယ်ဝန်ရှိနေသူအမျိုးသမီးဟာ ကိုယ်ဝန် လရင့်တဲ့အထိ ချစ်တင်းနှောနိုင်ပါတယ်။ ဝမ်းဗိုက်ကို မထိခိုက်အောင်တော့ ရှောင်ရမယ်ပေါ့။ လင်နဲ့မယား နှစ်ဦးနှစ်ဖက်
ရွှေယောက်ျားတို့ မှတ်သားဖို့ မိန်းမတွေ ပြီးတယ်ဆိုတာ
ချစ်တင်းနှောတဲ့အခါ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် အသာယာဆုံး၊ ကျေနပ်မှု အရရှိဆုံး ခံစားချက်တွေ၊ ကိုယ်ခန္ဓာမှာ ဖြစ်ပေါ်လာတာတွေ အားလုံးကို ပေါင်းရုံးပြီး “ပြီးတယ်”လို့ ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ အမျိုးသားတွေ ပြီးတာကို သုက်ထွက်တာနဲ့ အထင်ရှားဆုံး အကောင်အထည်ပြလို့ ရပေမယ့် အမျိုးသမီးတွေ ပြီးတာကိုကျတော့ အဲဒါမျိုးပြလို့ မရဘူး။
နိုင်ငံခြားက မထော်မနန်း အပြာကားတွေမှာတော့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ မျိုးဆက်ပွားအင်္ဂါတွေထဲကနေ အရည်တွေ တဗျန်းဗျန်း ပန်းထွက်တာတွေ ရိုက်ပြထားတာ အများအပြားရှိတယ်။ အပြာကားကို ပြဋ္ဌာန်းချက်အောက်မေ့နေသူတွေ အတွက်တော့ အဲဒါကို အဟုတ်မှတ်နေတာလည်း တစ်ပုံကြီးရယ်။ သူတို့တွေ ကိုယ်တိုင် ပင့်ကူလူသားအဖြစ် ကုန်သည်ကြီးများ ဟိုတယ်တို့၊ ဆာခူရာမျှော်စင်တို့ရဲ့ နံရံတွေပေါ် တက်ပြနိုင်တဲ့ တစ်နေ့ကျရင် သူတို့နဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့ မိန်းမတွေရဲ့ အင်္ဂါတွေက ထွက်လာတဲ့ အရည်တွေ အားကိုးပြီး မီးသတ်ဘူး ဆောင်ထားစရာ လိုတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
တကယ်တော့ အမျိုးသမီးတွေ “တကယ်ပြီးတဲ့”အချိန်မှာရော၊ လိင်စိတ်နိုးကြားလာချိန်များမှာပါ ခန္ဓာကိုယ်မှာ “စိတ်မှတ်မဲ့ တုံ့ပြန်မှု”တွေ ပေါ်ပေါက်လာတတ်စမြဲပါ။ “စိတ်မှတ်မဲ့ တုံ့ပြန်မှု”ဆိုတာက ကြက်သီးထတာ၊ နှာချေတာ၊ ဒူးတုန်တာမျိုးများလို ကိုယ်က တမင် လုပ်တာ မဟုတ်ဘဲ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကြောင့် အလိုလို ထဖြစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တုံ့ပြန်မှုမျိုးပါ။
ယောက်ျားတွေ လိင်စိတ်နိုးကြားလာချိန်မှာ ငယ်ပါ တင်းမာလာတာ သဘာဝဖြစ်သလို မိန်းမသားတွေ လိင်စိတ်နိုးကြားလာချိန်မှာ သူတို့ရဲ့ မျိုးဆက်ပွားအင်္ဂါကလည်း ပုံမှန်အနေအထားထက် ပိုမိုစွင့်ကားလာပါတယ်။ သည့်ထက်ပိုနိုးကြားလာရင် အင်္ဂါမှာ အရည်များစိုစွတ်လာပါတော့မယ်။ ဒါက ခန္ဓာကိုယ်က စိတ်မှတ်မဲ့ တုံ့ပြန်တာပါပဲ။
“ပြီးတာ”ကျတော့ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ကိုယ်တိုင် အမှန်တကယ် ခံစားဖူးရင် “မလွဲမသွေ” သိပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီ့ ပြီးခြင်းခံစားချက်ကို တခြားဘယ်နည်းနဲ့မှ ခံစားသိရှိနိုင်မှာ မဟုတ်လို့ပါပဲ။
ဒါပေမယ့် အမျိုးသမီးတစ်ယောက် “ပြီးဖို့”ဆိုတာ စက္ကန့်ပိုင်းမှသည် နာရီနဲ့ ချီပြီး ကြာတတ်ပါတယ်။ အဲဒီ့မှာ ပုံသေနည်း မရှိပါဘူး။ သည်တစ်ယောက်ထဲမှာတောင်မှ တစ်ခါတစ်လေမှာ ပြီးဖို့ ဘာမှ မကြာလိုက်ပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေကျရင် ဘယ်လောက် လှုံ့ဆော် လှုံ့ဆော် မပြီးတတ်နိုင်သလို တစ်ယောက်က အလွယ်ပြီးတတ်တိုင်း နောက်တစ်ယောက်လည်း သူ့လိုပဲလို့ ပုံသေတွက်ထားလို့ မရပါဘူး။ ဒါ တစ်ဦးချင်းစီကိစ္စပါ။ ယေဘုယျပြောရင်တော့ မိန်းမသား အများစုဟာ တစ်ကိုယ်ရေ အာသာဖြေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒါမှမဟုတ် အမျိုးသားတစ်ယောက်က သူတို့ တစ်ကိုယ်ရေ အာသာဖြေသလို လက်နဲ့ ဖြစ်စေ၊ ပါးစပ်နဲ့ဖြစ်စေ နည်းမှန်လမ်းမှန် လှုံ့ဆော်ပေးရင်ဖြစ်ဖြစ် ၁၀ မိနစ်လောက်အတွင်းမှာ ပြီးသွားနိုင်တယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
ယောက်ျားတစ်ယောက်အတွက်က သည် ၁၀ မိနစ်ဆိုတာ အတော်ကြာနေပါပြီ။ ယောက်ျားတစ်ယောက် သိပ် စိတ်ထက်သန်နေရင် တစ်မိနစ်၊ နှစ်မိနစ်အတွင်းတောင် ပြီးသွားနိုင်ပေတာကိုး။ မိန်းမသားအများစုအတွက်ကျတော့ အဲသလောက်နဲ့ ပြီးဖို့က အတော်ခဲယဉ်းပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် အတွေ့အကြုံအရ ပြောရရင် ဘယ်လောက် လှုံ့ဆော် လှုံ့ဆော် လုံးလုံး မပြီးသူတွေ ရှိပါတယ်။ ပြီးသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ သည်ထဲကမှ ရှားရှားပါးပါး တစ်ယောက်ကတော့ အလွန်ပြီးလွယ်တတ်တယ်။ အံ့အားသင့်စရာ ကောင်းအောင်ကို အချိန်တိုအတွင်း ပြီးနိုင်သလို အကြိမ်ကြိမ်လည်း ပြီးနိုင်ပါတယ်။ ဒါက အများထဲက တစ်ယောက်ပေါ့။
ပြီးတာကို မကြုံဖူးသေးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ သိအောင် ပြောရရင်တော့ ပြီးခါနီးလာရင် ဆီးသွားချင်သလို ခံစားမှုမျိုး ပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲသလို ပြောသလို ဆီးသွားချင်တာနဲ့ တစ်ထပ်တည်း တူတဲ့ ခံစားချက်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ မျိုးဆက်ပွားအင်္ဂါမှာ ဆီးသွားချင်လာတဲ့အခါ ဖြစ်လာတတ်တဲ့ ခံစားချက်နဲ့ ဆင်ဆင်တူတယ်လို့သာ ပြောလို့ရပါတယ်။
အဲလိုနဲ့ ပြီးသွားချိန်မှာ အင်မတန် ပြင်းထန်လှတဲ့ အပူဓာတ်၊ ဒါမှမဟုတ် ကျင်ခနဲ ဖြစ်သါားတဲ့ ခံစားချက်က အစေ့ကနေ မျိုးဆက်ပွားအင်္ဂါတစ်ခုလုံးမှာ ဟုန်းခနဲဖြစ်သွားသလို တစ်ကိုယ်လုံးအနှံ့ကိုလည်း ပြန့်သွားပါတော့မယ်။ အဲဒီ့နောက် ဆက်တိုက်ဖြစ်မှာက မျိုးပွားအင်္ဂါထဲက ကြွက်သားများသာမက စအိုက ကြွက်သားများပါ ကြုံ့ခနဲ၊ ကြုံ့ခနဲ တုန်ယင် ကြုံ့ဝင်ပါတယ်။ အဲဒါက သုံးလေးကြိမ်မှအထိ ခြောက်ကြိမ် ခုနစ်ကြိမ်အထိ ဖြစ်တတ်တယ်။
အဲဒီ့အချိန်မှာ နှလုံးခုန်တာလည်း အလွန်မြန်နေလိမ့်မယ်။ ခြေဖျားတွေလဲ အလိုလို ကွေးချင်ကွေးသွားနိုင်တယ်။ အသက်အောင့်ထားရမလိုလို၊ အသက်ပဲ တအားရှူရတော့မလိုလို ဖြစ်လာမယ်။ တစ်ကိုယ်လုံးလည်း တောင့်တင်းနေပြီး ခါလိုက်ချင်သလို တွန့်လိုက်ချင်သလို တုန်တုန်ယင်ယင်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာ မထိန်းနိုင်ပဲ အော်မိ၊ ညည်းမိနေတတ်ပါတယ်။
ဘယ်သူတွေ ဘယ်လို ပြီးနိုင်သလဲ
အဲဒီ့အချိန်မှာ ခံစားရတဲ့ ရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်း ခံစားချက်ဟာ ဘယ်လို ခံစားချက်နဲ့မှ အစားထိုးမရ၊ နှိုင်းယှဉ်လို့ မရအောင် ထူးထူးခြားခြားဖြစ်နေမှာလည်း သေချာပါတယ်။ အများစုအတွက်က အဲဒီ့ခံစားချက်ကို အသာယာဆုံးလို့ နားလည်ထားကြပေမယ့် သိပ်ကို နည်းတဲ့ အနည်းစုကတော့ တစ်ခါ ခံစားဖူးတာနဲ့ တအားလန့်သွားပြီး နောက်တစ်ခါ ထပ်ခံစားရမှာကို သေရမလောက် ကြောက်သွားတတ်ကြတယ်။
မြန်မာတွေမှာကျတော့ ဒါကို သွန်သင်မှု မရှိတဲ့အပြင် လိင်ကိစ္စကို ရှက်စရာ၊ အကုသိုလ်အမှု၊ ဘာညာ စသဖြင့် တစ်သက်လုံး ဆိုးဆိုးရွားရွား အသွန်သင်ခံထားရသူများဆိုရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း အသက်သာ အစိတ်ကျော်လာတယ်၊ တစ်ခါမှ မစူးစမ်းဖူး၊ ကိုယ်နဲ့ ညားတဲ့ ယောက်ျားကလည်း ဘုမသိ ဘမသိနဲ့ အပြာကားနဲ့ အပြာစာအုပ်ကိုသာ အဟုတ်မှတ် ကြိတ်ယုံထားသူ ဖြစ်နေလို့ကတော့ သေသည်အထိ ပြီးတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကို ရမသွားနိုင်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် အသက် ၄၀ တန်းနဲ့ အထက်၊ ကျွန်တော်တို့ အမေအရွယ်၊ အဖွားအရွယ် ဘိုးဘေးဘီဘင်များလက်ထက်မှာ ပြီးတယ်ဆိုတာ ဘာမှန်း မသိဘဲ သေသွားတဲ့ မိန်းမတွေက ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းမက ရှိလောက်ပါတယ်။
အဲ… တစ်ခုတော့ ရှိတယ်။ အထက်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ ပြီးနည်းမျိုးဟာ အမြဲတစေတော့ ဖြစ်နေမှာ မဟုတ်ဘူးနော်။ တစ်ခါတစ်လေကျရင် အဲသလိုမျိုး ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲသလောက် မပြင်းထန်ဘဲ အလွန်သာယာတဲ့ ခံစားမှုလောက်နဲ့ ပြီးတာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အဲဒီ့လိုဖြစ်တာကလည်း တဖြည်းဖြည်း သိမ်မွေ့လာပြီး ငါးစက္ကန့်မှသည် စက္ကန့် ၂၀ လောက်အတွင်းမှာ စတင် ကွယ်ပျောက်သွားတော့မှာပါ။ ကိုယ်ခန္ဓာကလည်း ပြေလျော့သွားမယ်၊ အသားသိပ်ဖြူတဲ့သူတွေဆိုရင် ရင်သားအထက်မှာ ပန်းသွေးရောင်လျှမ်းလာနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ့နောက်မှာ နားချင်တဲ့ စိတ်ရင်လည်း ပေါက်ချင် ပေါက်လာမယ်၊ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ပြီး သည်လို ခံစားချက်မျိုး ဖြစ်လာအောင် ပြန်လုပ်ချင်တဲ့ စိတ်လည်း ဖြစ်ချင် ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါလည်း တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူပါဘူး။
သိပ်တော့ ဖြစ်ခဲတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့တွေမှာ ဖြစ်တတ်တာကတော့ တစ်ကြိမ်တည်း မဟုတ်ဘဲ အကြိမ်ကြိမ် ပြီးနေတာက မနားတမ်းဆက်တိုက်ဖြစ်နေတာမို့ တစ်ကြိမ်တည်း ပြီးသလို ခံစားရတာမျိုးပေမယ့် ပြင်းထန်တဲ့ အဲဒီ့ ရုပ်ပိုင်း အရသာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တောင့်ခနဲ ဖြစ်သွားတာတို့ဟာ စက္ကန့် ၃၀-၄၀ လောက်မှသည် သုံး-လေးမိနစ်လောက် အထိ တာရှည်နေတတ်ပြန်တယ်။ ထပ်ပြောမယ်နော်… ဒါအမျိုးသမီးတိုင်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဖြစ်ဖူးတဲ့ အမျိုးသမီးပေမယ့် နှစ်ပေါင်း သုံးဆယ်လောက်မှာမှ ဒါမျိုးက သုံး-လေးခါသာ ကြုံတောင့် ကြုံခဲ ကြုံရတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ကျွန်တော်က မိန်းမတစ်ယောက် မဟုတ်တဲ့အတွက် သည်ခံစားချက်ကို တစ်ဆင့်ကြားနဲ့၊ စာတွေ့နဲ့၊ ကိုယ်တွေ့မျက်မြင်နဲ့လောက်ပဲ ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ ပြီးသွားတဲ့ မိန်းမတွေကို မေးတဲ့အခါ ဘယ်လိုဆိုတာ သရုပ်ပေါ်အောင် ပြန်ပြောတတ်တဲ့ မိန်းမဆိုတာ တစ်ယောက်မှ မကြုံဖူးသေးပါဘူး။ ဆင်ဆိုသည်မှာ နံရံကြီးပါလို့ ပြောသလိုပဲ ဟိုလိုဖြစ်တယ်၊ သည်လို ဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြတာလောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ မျက်မြင်တွေ့ရချိန်မှာလည်း တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်က မတူပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ပုံသေကားကျ အင်မတန် အပြောရခက်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အထက်က ပြောတဲ့ အစီအစဉ်အတိုင်း တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဆက်တိုက်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောရလည်း ခက်နေဦးမှာပါ။ အဲဒါတွေ အားလုံးဖြစ်ချိန်ကလည်း စက္ကန့်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာတင် ဖြစ်သွားတာမို့ ဘယ်ဟာက အရင်၊ ဘယ်လိုက နောက်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင် ခံစားမကြည့်ဘဲနဲ့ မသိနိုင်ပါဘူး။
အခု ဒါကို ရေးပြလိုက်ရတာက အပြာစာအုပ်နဲ့ အပြာကားတွေကို အဟုတ်မှတ်နေတဲ့ ယောက်ျားလေးတွေကို ရှင်းပြစရာ ရှိနေလို့ အစချီလိုက်တာပါ။
(၁) ယောက်ျားလေးတွေလို ငယ်ပါကို အမျိုးသမီးအင်္ဂါထဲ အသွင်းအထုတ် လုပ်နေရုံနဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မပြီးနိုင်ပါဘူး။ ဒါကို ယောက်ျားလေးတွေ ကောင်းကောင်း သိဖို့ လိုပါတယ်။
(၂) အပြာကားတွေထဲကလည်း အမျိုးသမီးတွေရဲ့ မျိုးဆက်ပွား အင်္ဂါထဲက အရည်တွေ ပန်းထွက်တယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ထွက်တယ်ဆိုရင်တောင်မှ အဲသလောက် အများကြီး မထွက်ဘူး။ အလွန်ဆုံးမှ လက်ဖက်ရည် ဇွန်း သေးသေးလေးနဲ့ တစ်ဇွန်းစာလောက်သာ ထွက်ပါတယ်။ အမှန်က တကယ့်ကို နည်းနည်းလေးသာ ထွက်ပါတယ်။ အဲဒါကလည်း “ဆလိမ်ကွက်”ကို လှုံ့ဆော်မှ ထွက်နိုင်တာမျိုးပါ။ အဲဒီ့နေရာကို လှုံ့ဆော်လို့ ပြီးတိုင်းလည်း မထွက်ပါဘူး။ တစ်သက်လုံးမှာ တစ်ခါပဲ ထွက်ချင်လည်း ထွက်မှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် အမျိုးသမီးအင်္ဂါက အရည်ထွက်တဲ့ ကိစ္စကို အပြာစာအုပ်နဲ့ အပြာကားထဲမှာ ထားရစ်ခဲ့ကြစေချင်ပါတယ်။ ပြင်ပ လက်တွေ့ဘ၀ကို သယ်မလာကြစေချင်ပါဘူး။
(၃) ကတော့ “မျှော့”ပြဿနာပါ။ ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ မျှော့ပါတယ်ဆိုတဲ့ စကားကြီးက ကျွန်တော်တို့ကို အတော် ဖမ်းစားထားပါတယ်။ တကယ်တော့ ဘာမျှော့မှ မဟုတ်ပါဘူး။ ပါတယ်ဆိုရင်လည်း အမျိုးသမီးတိုင်းမှာ ပါပါတယ်။ သို့သော် မပြီးရင် မဖြစ်ပါဘူး။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် တကယ်ပြီးနေချိန်မှာ သူ့အင်္ဂါထဲက ကြွက်သားတွေက ကြုံ့ဝင်သွားပြီး ငယ်ပါကို ဆုပ်ညှစ်သလို ဖြစ်စေပါတယ်။ တချို့ရဲ့ ပြီးပုံက ပြင်းထန်လွန်းတဲ့အခါ အဲသလို ညှစ်လိုက်တဲ့အားက အတော်ပြင်းတဲ့အတွက်၊ လက်နဲ့ ဆုပ်ညှစ်လိုက်သလောက်ကို ပြင်းတဲ့အတွက် အဲဒါကို ရွှေယောက်ျားတချို့က မျှော့ မျှော့နဲ့ တမျှော့တည်း မျှော့နေကြခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမည်မဖော်လိုတဲ့ ဆရာမကြီးတစ်ဦးကတော့ သူ့သင်တန်းသူတွေကို မျှော့အတုလုပ်နည်း သင်ပေးထားပါတယ်။ ဘာမှ မခက်ပါဘူး။ စအိုကို ရှုံ့ရှုံ့ပေးလိုက်ရင် ယောက်ျားရဲ့ ငယ်ပါက ငေါက်ခနဲ ငေါက်ခနဲ ဖြစ်သွားသလို စအိုကို ရှုံ့ရှုံ့ပေးရင် အမျိုးသမီးရဲ့ အင်္ဂါအတွင်းက ကြွက်သားကလည်း ကြုံ့ကြုံ့သွားပါတယ်။ အဲဒါကို ယောက်ျားတစ်ယောက် သုက်ထွက်ချိန်မှာ ကစား ကစား ပေးရင် ယောက်ျားတွေက စွဲတယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ အဲဒီ့ဆရာမကြီးက သေချာလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတာပါ။
တကယ်တော့ အိမ်ထောင်ရေးဘ၀မှာ လိင်ကိစ္စက အတော်လေး အဓိကကျပေမယ့် အဲဒီ့တစ်ခုတည်းနဲ့ ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမကို စည်းနှောင်ပေးထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တခြား အကြောင်းရပ်တွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ မိန်းမမှာ အဲဒီ့ မျှော့အတတ် ဘယ်လောက် တစ်ဖက်ကမ်းခတ် တတ်နေနေ၊ အိပ်ရာထဲမှာ ဘယ်လောက် သာယာနေနေ၊ တစ်နေ့တစ်နေ့ နားပူ ဂျီကျနေတဲ့ မိန်းမ၊ ဖြစ်ကတတ်ဆန်းနေတတ်တဲ့ မိန်းမ၊ အကျင့်တန်တဲ့ မိန်းမဆိုရင် ဘယ်ယောက်ျားက တွယ်တာ မြတ်နိုးနေမှာလဲ။
တကယ်တော့ ကျွန်တော်အပါအ၀င် ယောက်ျားတွေဟာ သည်ကိစ္စကို တော်တော့်ကို အလေးထားကြပါတယ်။ သည်ကိစ္စကို သိချင် တတ်ချင် အစွမ်းထက်ချင်သလောက်သာ ဘ၀တိုးတက်ရေးအတွက် ဆည်းပူးကြ၊ လေ့လာကြ၊ လေ့ကျင့်သွားကြမယ်ဆိုရင် တကယ့်ကို ထိပ်တန်းနေရာမှာ ရောက်နေကြမှာလည်း မလွဲပါဘူး။
အမျိုးသားများ ကာမစိတ် လျော့ကျလာသောအခါ ဖြစ်လေ့ရှိသော လက္ခဏာများ
ရွှေပိတောက်ဆေးရုံ ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုပါရဂူ၏ရှင်းပြချက်အရ အမျိုးသားများကာမစိတ်လျော့ကြ ခြင်းဆိုသည်မှာ လိင်ဆက်ဆံသောသူများ ကာလကြာရှည်စွာကာမစိတ်လျော့နည်းခြင်း (သို့)ကာမစိတ်မရှိခြင်းကို ခေါ်ပါသည်။ ကာမစိတ်လျော့နည်းသွားလျှင် အမျိုးသားများ၏ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကာမစိတ်လျော့နည်းခြင်းလက္ခဏာကိုသိရှိပါက အချိန်မီကုသမှု ခံယူသင့်ပါသည်။
အမျိုးသားများကာမစိတ်လျော့ကျခြင်းမှာ ကာမစိတ်ဆန္ဒလုံးဝမရှိခြင်းနှင့် လိင်ဆက်ဆံခဲ့လျှင်လည်း စိတ်မအီမသာဖြစ်ကာ ပျော်ရွှင်မှုမရှိခြင်း၊ စိတ်ညစ်ရခြင်း၊ ကာမစိတ်ဆန္ဒကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းနှင့် ငြင်းဆန်ခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ပါသည်။ အချို့လူနာရှင်များသည် လိင်ဆက်ဆံမှုကိုဝန်မခံခြင်းမှာ ဝမ်းနည်းသောစိတ်ကို လျော့ကြစေသောနည်းလမ်းဖြင့် မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ကြသည်။
ကာမစိတ်လျော့ကြသောလူနာသည် ကာမစွမ်းအားအဟန့်အတားရှိသောလူနာထက်ပို၍ ဒေါသထွက် လွယ်ပျော့ညံ့ပြီး မိမိကိုယ်ကိုပို၍ကာကွယ်ကြသည်။
ကာမစိတ်လျော့ကြခြင်းသည် စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းနှင့် အမြဲဒွန်တွဲနေတတ်သည်။ ကာမစိတ် လျော့ကြသောလူနာသည် ကာမစိတ်အထွတ်အထိပ်မရောက်သောသူနှင့် စိတ်လှုပ်ရှားမှုအနှောက်အယှက်ရှိ သောသူထက်ပို၍ ခေါင်းမာပြီးရောဂါလက္ခဏာ အလွန်ဆိုးဝါးသည်။
ကာမစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းမှာများသောအားဖြင့် မိမိ၏နေထိုင်မှုပေါ်တွင် စိတ်ပျက်ခြင်းနှင့် မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့ခြင်း၊ လုပ်ငန်းအဆင်မပြေခြင်း၊ လူမှုဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေခြင်း၊ အိမ် ထောင်ရေးပဋိပက္ခဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့် စိတ်ကျဉ်းကြပ်ခြင်း၊ ဝမ်းနည်းခြင်း၊ စိတ်အလိုမကျခြင်းဖြစ်ပြီး ကာမစိတ်များကျဆင်းစေပါသည်။
ရွှေပိတောက်ဆေးရုံ ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုပါရဂူ၏ရှင်းပြချက်အရ အချို့လူနာရှင်များသည် ကာမစိတ်လျော့ကျခြင်း၊ လိင်တံမကြွခြင်း(သို့)လိင်တံကြွသော်လည်း မမာခြင်းများဖြစ်တတ်ပါသည်။ သို့သော်အချို့သောလူနာရှင်များတွင် ကာမစွမ်းအားပုံမှန်ရှိပါသည်။ ထို့နောက်ကာမစိတ်၏တုံ့ပြန်မှုကို မထိခိုက်ဘဲပုံမှန်အတိုင်း လိင်ဆက်ဆံမှုပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ လိင်ဆက်ဆံသည့်အချိန်တွင်လည်း ကာမစိတ်အထွတ်အထိပ်ရောက်ခြင်းကို အဟန့်အတားမဖြစ်စေပါ။
ဆီးလမ်းကြောင်းမျိုးပွားအင်္ဂါရောဂါရှိသူများသည် လိင်ဆက်ဆံချိန်တွင် ပုံမှန်မဟုတ်သောတုံ့ပြန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါသည်။ ဥပမာ-နာတာရှည်ဆီးကျိတ်ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ကပ္ပယ်အိတ်အမြှေးပါးရောင်ရမ်းခြင်း၊ ဆီးလမ်း ကြောင်းရောင်ရမ်းခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်ဟော်မုန်းဓါတ်မမှန်ခြင်းရောဂါ၊ တကိုယ်လုံးနာတာရှည် ရောဂါအမျိုးမျိုးတို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဖိုဓါတ်ဟော်မုန်းထုတ်လွှင့်မှုနည်းခြင်းကြောင့်လည်း ကာမစိတ်ကိုထိခိုက်စေပါသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းနေသောအချိန်တွင်လည်း ကာမစိတ်ဆန္ဒလျော့ကျတတ်ပါသည်။
ကြာရှည်စွာကာမစိတ်လျော့ကျခြင်းသည် လင်မယားကြား၏ချစ်ခင်ကြင်နာမှုကို ထိခိုက်စေရုံမကခန္ဓာ ကိုယ်နှင့်အာရုံကြောအခြေအနေအလိုက် တုံ့ပြန်ခြင်းကြောင့်အလေးထားပြီး ဂရုစိုက်သင့်သည်။ ထို့အပြင်ခန္ဓာ ကိုယ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုလည်း အချိန်မီစစ်ဆေးပြီး ရောဂါလက္ခဏာတွေ့ရှိပါက လျင်မြန်စွာကုသသင့်ပါသည်။ အိမ်ထောင်သည်များသည် အသက်အရွယ်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ ကာမစိတ်ဆန္ဒများတဖြည်းဖြည်းလျော့ကျလာခြင်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ရောဂါလက္ခဏာမဟုတ်ပါ။
Posted by Admin at Monday, August 31, 20150comments
အမေးရှိလို့ ရေးရပြန်ပါပြီ။ “ကျားအင်္ဂါ ကြီးစေခြင်း” Penis enlargement ကြော်ညာတွေ ဘယ်လောက် ဆွဲဆောင်မှုရှိပါစေ မယုံပါနဲ့ဆိုတာ ပဌမဆုံး မှတ်သား စေချင်ပါတယ်။
ဂရိ (မိုက်သော်လော်ဂျီ) ထဲက Priapos ဆိုတာ ဥယျာဉ်ခြံမြေ၊ မွေးမြူရေးနဲ့ အသီးအနှံတွေရဲ့ ဘုရားအဖြစ် သာမက ကျားလိင်အင်္ဂါရဲ့ အရှင်သခင်လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ သူ့အင်္ဂါဟာ အမြဲတမ်း သန်မာနေတာမို့ ဆေးပညာမှာ အဲလို ပြန်မလျော့ဘဲ ကျားအင်္ဂါ သန်မာနေတာကို Priapism လို့ ခေါ်တယ်။ သူတို့ဘုရားလဲ ရောဂါမကင်းဘူး။ ၉ ရာစု Arabian Nights ပုံပြင်တွေထဲက Ali with the Large Member မှာတော့ ကျားအင်္ဂါ အရွယ်အစားကို သရော်ထားပါတယ်။ “ဒါ ကြီးတိုင်းသာ ဆရာတင်ချင်ရင် ‘လား’ ကိုသာတင်ကြ” တဲ့။
နောက်တချက် မှတ်ဘို့က ဒီလို “ကဲ” ဘို့ တကယ်တန်း မလိုလှပါ။ Psychology Today ရဲ့ (ကာဗာ-စတိုရီ) တခုမှာ အမျိုးသမီး ၁၅၅ဝ ယောက်ရဲ့ အများစုက “အရွယ်အစား ဂရုမစိုက်ဘူး” ဆိုပါတယ်။ ၇၁% သော ယောက်ျားတွေကသာ ကိုယ့်ဟာကို ဂရုအစိုက် လွန်နေကြပါသတဲ့။ ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်တုံးက Internet survey တခုမှာ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကိုသာ စိတ်ဝင်စားသူပေါင်း ၅၂ဝ၃၁ ယောက်ကို မေးမြန်းတဲ့အခါ ကိုယ့်အရွယ်အစားကို ကျေနပ်ကြသူ ယောက်ျား ၅၅% ရှိပြီး၊ အမျိုးသမီး ၈၅% ကတော့ သူတို့ အဖေါ်တွေရဲ့ အရွယ်အစားကို ကျေနပ်ကြကြောင်း ဖြေပါတယ်။ အမျိုးသမီး ၆% ကသာ အနုတ်သဘောဖြေတယ်။ သူတို့တတွေထဲကဘဲ ၇ဝ%သော အမျိုးသမီးများက ကိုယ့်ရင်သားကိုယ် ကျေနပ်ကြပြီး၊ ၅၆% သော ယောက်ျားများကတော့ သူတို့အဖေါ်ရဲ့ ရင်သားကို ပိုထွားစေချင် ကြပါသတဲ့။ ဒီတော့ လိုတာထက် ပိုချင်နေကြတာ ယောက်ျားများပါဘဲ။
BMC Women’s Health ကနေ သုတေသနလုပ်တော့ width rather than length လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီတော့ ဆန္ဒပိုလို့ အလိုရှိသူများ ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲ။ ဆရာဝန်တွေအဖို့ ရောဂါကို ကုရတာထက် ရောဂါမဟုတ်တာကို ကုရတာ ပိုပြီး လက်ဝင်လှပါတယ်။
“ဒါး”နဲ့ စပြောပါမယ်။ ခွဲစိတ်ပြုပြင်နည်း။ Penis lengthening (Enhancement Phalloplasty) နဲ့ Penis widening (Girth Enhancement) ဆိုတာတွေ Urologic literature ထဲမှာ ပါနေပါတယ်။ ခွဲစိတ်-ခန္ဓာဗေဒအရ ကျားလိင်အင်္ဂါရဲ့ သုံးပုံတပုံ ကနေ တဝက်လောက်ဟာ ကိုယ်အတွင်းထဲက ဆီးစပ်ရိုးအောက်ခြေမှာ တွယ်နေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီအပိုင်းကို အပြင် ရောက်လာအောင် Fundiform ligament နဲ့ Suspensory ligament အရွတ် ၂ ခုကို ခွဲစိတ်ပြီး၊ အပြင်ကို ထုတ်ပေးတာပါ။ တခုက ကောက်နေအောင် ဆွဲပေးထားခဲ့တာမို့ ဖြတ်လိုက်ရင် ဖြောင့်ပြီး၊ 2-3cm (0.78-1.18 in) ပိုရှည် လာစေတယ်။ ဒါပေမဲ့ လန်ဒန် St. Peter’s Andrology Centre and Institute ကနေ ခွဲစိတ်ကုသခံသူ လူနာ အများစုဟာ သိပ်ကြေနပ်မှု မရှိကြကြောင်း၊ ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်မှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
“ဒါး”ပြီးတော့ “လက်” လာမယ်။ (အက်တာနက်) မှာ Penis enlargement pills, Penis patches, Ointments တွေ အမျိုးမျိုး ကြော်ညာနေတယ်။ Spam email messages တွေထဲမှာ အများဆုံးပါဘဲ။ အမိုင်နိုအက်စစ်တမျိုးကို Lotion for men လိမ်းဆေးအဖြစ် သုံးကြတယ်။ Andractim DHT Gel – DHT (Dihydrotestosterone) ဆိုတာက Testosterone ကို အားကောင်းအောင် လုပ်ထားတဲ့ လိမ်းဆေး။ Micropenis လို ဖြစ်နေသူတွေအတွက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ Flora Research of California နဲ့ University of Maryland တို့ကနေ အဲဒါတွေမှာ (mold, yeast, E. coli bacteria, pesticides, and lead) အန္တရာယ် ပေးတဲ့အရာတွေ အများကြီး ပါတယ်လို့ ရေးပါတယ်။
ဆေးဝါးတွေနဲ့စာရင် လေ့ကျင့်ခန်းဆိုတာက ဘေးထွက်ဆိုကျိုးကို မစိုးရိမ်ရပါ။ ဒါ့ကြောင့် Jelqing Technique နည်းဆိုတာ ဘာသာပြန် ရေးရရင် – ရေနွေးချိုးပါ၊ ရေနွေးဝတ်သုံးပါ။ ပိုးသန့်တဲ့ ဆီတခုခု လိမ်းပါ။ အရင်းကနေ အဖျားဆီ လက်တဖက်နဲ့ ခပ်တင်းတင်း ကိုင်ပြီး၊ ဆွဲချပေး။ လက်ကိုလဲ ဘယ်-ညာပြောင်း၊ ၁၅ကြိမ်လုပ်ပါ။ သန်မာလာတာကို ၂ဝ-၄ဝ% အထိသာ ဖြစ်လာပါစေ။ ပိုမသွားအောင် နားပါ။ ဆီ ဆိုရာမှာ အိန္ဒိယဆိုရင် မုံညင်းဆီ၊ မြေထဲပင်လယ်ဒေသမှာဆို သံလွင်ဆီ စသဖြင့် သုံးတယ်။ သူတို့အရပ်မှာ ပေါတာတွေကိုး။ ဗမာပြည်မှာ နှမ်းဆီ၊ အုံးဆီ၊ ကြက်ဆူဆီ စတာတွေ သုံးနိုင်ပါမယ်။ ဒီကိစ္စအတွက် သီးသန့်ခွဲထားပေါ့။ မဟုတ်ရင် မှိုရောဂါဝင်တတ်တယ်။ ပြီးရင် ဆပ်ပြာနဲ့ ကောင်းကောင်း ဆေးကြောပါ။
အမျိုးသားတွေဟာ အမျိုးသမီးတွေထက် လိင်ဆက်ဆံမှု နှစ်ဆ ပိုမိုလိုအပ်တာကြောင့် ပြည့်တန်ဆာ အလုပ်ကို တရားဝင်ခွင့်ပြုသင့်သည်ဟု ဆို
ဗိတိန် စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် (IEA) က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လိင်ဆန္ဒအပေါ် သုတေသနလေ့လာချက်မှာ အမျိုးသားတွေဟာ အမျိုးသမီးတွေထက် လိင်ဆက်ဆံမှုကို နှစ်ဆ ပိုမိုလိုအပ်တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ခြင်းနဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ဖျော်ဖြေမှုတွေဟာ လိင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အမှုအခင်း ဖြစ်ပွားနှုန်းကို လျော့ကျစေနိုင်တယ်လို့ လည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီလေ့လာမှုကို Dr. Catherine Hakim က ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး “ စုဆောင်းရရှိထားတဲ့ သက်သေအချက်အလက် တွေအားလုံးက ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းနဲ့ လိင်အသားပေးဖျော်ဖြေမှု တွေဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နဲ့ လူမှုရေးရာမှာ ဆိုးရွားတဲ့ သက်ရောက်မှု လုံးဝမရှိကြောင်း ဖော်ပြနေပါတယ်” လို့ သူမက ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
“ လိင်လုပ်ငန်းထွန်းကားတဲ့ ဂျပန်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင် နဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ တို့ မှာ အဓမ္မပြုကျင့်မှုနဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှုနှုန်း သိသိသာသာနည်းပါးပါတယ်” လို့ သူမက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ( အဆိုပါ နိုင်ငံတွေမှာ လိင်လုပ်ငန်းဟာ တရားဝင်မဟုတ်ပါ) “ ဥရောပမှာလည်း ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းကို တရားဝင်ခွင့်ပြုထားတဲ့ စပိန်နိုင်ငံမှာ အဓမ္မပြုကျင့်မှုနှုန်းဟာ သိသိသာသာ လျော့နည်းပါတယ်”ယူကေမှာ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းဟာ လုံးဝ တရားမ၀င်မဟုတ်ပေမယ့် ယင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုပ်ငန်းအများစု ကတော့ ဥပဒေအရ တားမြစ်ခြင်းခံထားရပါတယ်။ ထိုထဲမှာ ပြည့်တန်ဆာအိမ် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု၊ ပြည့်တန်ဆာရှာပေးမှု၊ ပြည့်တန်ဆာတွေကို တိုက်ခန်းဌားပေးခြင်းတို့ ပါဝင်ပါတယ်။
ဗြိတိန်မှာ လိင်ဖျော်ဖြေမှုလုပ်ငန်းဟာ တစ်နှစ်မှာ ပေါင် ၄.၃ ဘီလီယံ ၀င်ငွေရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာလုံးအနှံ့ စီးပွားဖြစ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖျော်ဖြေမှု လိုအပ်ချက်ဟာ မြင့်တက်လျက်ရှိပြီး အမျိုးသားတွေဟာ သူတို့ ရဲ့ကာမဆန္ဒလိုအပ်ချက် ပြည့်ဖို့ အတွက် ပြည့်တန်ဆာတွေကို အသုံးပြုနေကြပါတယ်။
Posted by Admin at Friday, August 28, 20150comments
လိင်ဆက်ဆံပြီဆိုရင်တော့ အထွဋ်အထိပ် မရောက်ရင် အလိုမပြည့်ဘဲ အိမ်ထောင်ရေး မသာယာနိုင်ပါ
လိင်ဆက်ဆံမှု သုခ မပြည့်ဝရင် အိမ်ထောင်ရေး မသာယာနိုင်ပါ။
ကျေနပ်သာယာမှုတခုကို ခံစားနေတဲ့ အချိန်မှာ ကြည်နူးဖွယ်ရာ အကောင်းဆုံးအခိုက်အတန့်တခုကို မရရှိဘဲနဲ့ ဘယ်သူမှ အဆုံးသတ်ချင်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဆုံးသတ်မှာ ဒီလို မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် အမျိုးသားများရော အမျိုးသမီးများပါ သူတို့ရဲ့ အဖော်အတွက် ရော သူတို့ကိုယ်တိုင်အတွက်ပါ အပြစ်မကင်းသလို ခံစားကြရပါတယ်။ စိတ်လှုပ် ရှားစရာ အကောင်းဆုံး ကစားပွဲတခုမှာ ပြီးဆုံးခါနီးရောက်မှ ပွဲထဲကနေထွက်လိုက်ရလို့ စိတ်ပျက်ရတာမျိုးနဲ့ အလားတူတယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။
လိင်ဆက်ဆံခြင်းရဲ့အထွဋ်အထိပ်ကိုမရောက်မီအချိန်မှာ သူတို့ရဲ့ အိမ်မှုကိစ္စတွေ ဒါမှမဟုတ် တခြား အိမ်တွင်းရေး အကြောင်း အရာတွေက အမျိုးသမီးတွေဟာ ခေါင်းထဲကိုဝင်လာတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို အတွေးက ၀င်လာရင် ကိုယ်တိုင် ဖျောက် ဖျက် ပစ်ဖို့လည်း ခက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမျိုးသမီးတွေ အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ နေ့စဉ် အိမ်မှုဝတ္တရားတွေနဲ့ ပတ်သက် တာ တွေ မှန်သမျှ မတွေးမိအောင် နေသင့်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကို စိတ်ရောက်စေမယ့် အရာတွေကိုလည်း မမြင်အောင် ဖယ်ရှား ထားသင့်ပါတယ်။
အမျိုးသားတွေ အတွက်တော့ အရက် အလွန်အကျွံသောက်ခြင်း၊ ကြွက်သားအားနည်းခြင်း၊ စိတ်ကျရောဂါခံစားနေရခြင်း၊ ဆီးချိုရောဂါ ဒါမှမဟုတ် လိင်ကိစ္စကို အဟန့် အတားဖြစ်စေတဲ့ ဆေးဝါးတွေကို မှီဝဲနေရသူတွေဟာ လိင်ဆက်ဆံခြင်းရဲ့ အထွဋ်အထိပ်ကိုရရှိဖို့ အခက်အခဲရှိတွေ့လေ့ရှိပါတယ်။
သုက်ရည်ပန်းထုတ်နိုင်ဖို့ အတွက် sympathetic နာ့ဗ်ကြောတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်လိုပါတယ်။ သွေးလွှတ်ကြော ခွဲစိတ် ကုသမှု တချို့ကြောင့် အဲဒီ နာ့ဗ်ကြောတွေ ထိခိုက်နေနိုင်ပါတယ်။
လိင်ဆက်ဆံခြင်းရဲ့အထွဋ်အထိပ်ကိုရောက်တော့မယ့် အချိန်မှာ အာရုံစူးစိုက်လွန်းတာကလည်း မှားယွင်းတဲ့ ချဉ်းကပ်မှုဖြစ် ပါတယ်။ သာယာမှုကို ခံစားမယ့်အစား ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေ့လာသုံးသပ်နေတာကလည်း တခြားသူကို စိတ်အနှောက်ပေးသ လိုဖြစ်စေပါတယ်။ အထွဋ်အထိပ်ကိုရောက်တော့မယ့် အချိန်မှာ အသက်ကိုမှန်မှန် ရှူသွင်းရှူထုတ်တာဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ရဲ့ အဖော်ကို ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုဖြစိနေတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကို ပြောပြတာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်သင့်ပါတယ်။ ခံစားချက်တွေ အပြန်အလှန်သိနိုင်ခြင်းကနေ ကိုယ့်ရဲ့ အဖော်ကိုလည်း အထွဋ်အထိပ်ကို ရောက်စေနိူင်ပါတယ်။
အမျိုးသားတွေဟာ အလိုက်သင့်သွားနေရမယ့် အစား အထွဋ်အထိပ်ကိုရောက်မယ့် အချိန်ကို မျှော်လင့် စောင့်ဆိုင်းကြည့် နေမယ်ဆိုရင်လည်း အမြင့်ဆုံး သုခကိုရဖို့ အခက်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ အထွဋ်အထိပ်ကိုရောက်ဖို့ ကြာမြင့်ချိန်ကို တွေးနေ တတ်ခြင်းက ယောက်ျားတွေအတွက် ပြဿနာတခုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို သူတို့က ယောက်ျားပီသမှုနဲ့ ဆက်စပ်ထားပြီး တော့ သူတို့ရဲ့ အဖော်ကို စိတ်ကျေနပ်မှု မပေးနိုင်မှာလည်း စိုးရိမ်ကြပါတယ်။ အခက်အခဲကြုံရင်လည်း ချဲ့ကားပြီး တွေး လိုက်ကြတာက ပိုများပါတယ်။ တကယ်တော့ အခြေခံ ကြံ့ခိုင်ရေး နည်းလမ်းတွေလိုက်နာလိုက်ရုံလောက်နဲ့ အထွဋ်အထိပ် ကို သက်တောင့်သက်သာရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေ အနေနဲ့ကတော့ သူတို့က အပေါ်က နေတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့ အခါမှာ သူတို့ရဲ့ ဗိုက်နဲ့ တခြားကိုယ်ခန္ဓာ အစိတ်အပိုင်းတွေက ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်နေမလဲလို့ စိုးရိမ်မှုကြောင့် စိတ်အနှောက် အယှက်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ သူတို့ရဲ့ အမျိုးသားက ရမ္မက်စိတ်ဝင်နေပြီဆိုရင် တခြားမတွေးမိဘဲနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အမျိုးသမီးက ကြည့်ကောင်းတယ်လို့ပဲ တွေး ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အမျိုးသမီး အနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ် မလုံမလဲ စိတ်တွေ မဖျောက်နိုင်ဘူးဆိုရင် တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မမြင်ရတဲ့ ပုံစံအနေအထားကို ပြောင်းလိုက်တာက ကောင်းပါတယ်။
@ Irrawaddy Sex Blog
Posted by Admin at Wednesday, August 26, 20150comments
Drbikalay APK Download
Blonde hottie Vyxen fucks her personal trainer -
Anal Rounds - Bluebird Films - Length: 22:19 Keywords: bisexual hd
18 Videoz - Lindsey Olsen - Nataly Gold - Cream and coffee home sex party - When two horny teen couples get together foracasual home sex party both chicks can't wait to getagood taste of ebony cock, but the white guy gets his ...
ဒေါက်တာ တွတ်ပီ. Powered by Blogger.
ALL BLOG GUIDE LISTS http://www.drbikalay.com/ http://drvikekalay3.blogspot.com/ http://sextolives.blogspot.com/ http://www....
့မြန်မာ စစ်စစ်လေးပါ Myanmar
ALL BLOG GUIDE LISTS drbikekalay1@gmail.com (or) Hangouts သို့ ဓါတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို ဖိုင်များကို ဆက်သွယ်ပေးပို့ နိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအ...
Myanmar BBW ကိုယ်တိုင်ရိုက်လေးပါ
အတွင်းဖြစ် Myanmar အတွဲ ချောင်းရိုက်
ALL BLOG GUIDE LISTS drbikekalay1@gmail.com (or) Hangouts သို့ ဓါတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို ဖိုင်များကို ဆက်သွယ်ပေးပို့ နိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ...
ALL BLOG GUIDE LISTS ဒေါ်လေး မမြခိုင်ထူးသာ ရဲ့ လိင်ကိစ္စ လက်တွေ့ အတွေ့ အကြုံက စောသည်ပဲ ခေါ်ရမလား ထူးသာ ကိုးတန်း လောက်မှာ စသည်၊ ထူး...
Copyright (c) 2011 ဒေါက်တာ ဗိုက်ကလေး www.drbikalay.com. ® 2017All right Reserved. -